Project: Nnụnnụ Ọhịa enweghị njedebe - Ihe ọchị na Google Maps | Martech Zone
Kinddị ndị ahụ karịrị Nnụnụ Anụ Unlimited rịọrịọ enyemaka m na ịtụgharị maapụ ụlọ ahịa ha Google. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara m ji nọrọ jụụ n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụghị n'ihi na m apụgoro - ọ bụ n'ihi na m na-apụ apụ na-akụ ọrụ a na ogige ahụ!
Nakwa, M na-amalite a ọhụrụ oge ọrụ n'ime otu izu na-achọ ijide n'aka na anyị na-enwe ike ịnapụta ọma tupu anyị n'obi imecha! N'ihi nke a, enwetara m enyemaka… Stephen na-arụ ọrụ dị egwu na enyi m ọzọ, Todd, ga-enyere anyị aka ịkwalite ma hichaa koodu ọ bụla tupu nnyefe.
Na nkenke, etinyere ngwa ahụ na PHP, MySQL, na Ajax ma bụrụkwa ụzọ maka ndị ọbịa nnụnnụ na-achọ ebe dị ha nso. A na-echekwa data na faịlụ KML iji bulie arụmọrụ ma jiri atụmatụ kacha ọhụrụ na atụmatụ Google Map API. Enwere ụfọdụ ihe mgbagwoju anya yana enwere ike idobe data ahụ karịa otu ebe mana ọ bụ otu ihe ịma aka na-atọ ọchị.
Nke a bụ nhụchalụ nke (arụ ọrụ zuru oke!) Ngalaba nchịkwa ebe ndị nchịkwa nwere ike nbanye ma melite ọnọdụ nke ụlọ ahịa ha na maapụ:
A ka nwere ọrụ ị ga-arụ, mana ọganihu ahụ dị mma ruo ugbu a. Anyi kwesiri ibuputa nchekwa data nke GeoIP iji buru amuma ebe ndi obia bia, tinyekwara ha uzo uzo obula ha si biara. Ihe dị ụtọ! Nwee ndidi, n’ime izu ole na ole anyị ga-alaghachi na nkịtị.
Jul 30, 2007 na 7: 02 AM
Nice, Doug! Anyị mejuputara ihe yiri ya Fanim nke a ga ebido n’izu a. Yiri ọrụ, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwe ka faịlụ bulite ndị na-ere ahịa ma tinyekwa Canada. Ihe dị jụụ!
Oh, na obi ekele na oru ohuru. Na-atụ anya ịnụkwu banyere ya! Nnenna
Jul 30, 2007 na 8:20 PM
Odi ka oru ngo a n’abia nke oma, Doug. Ekwenyesiri m ike na ị ga-enwe obi ụtọ na akụkụ ihe okike nke ịkwalite ọrụ dị ka nke a.
Inye aro nke ga - eme ka ebumnuche azụmaahịa onye ahịa gị niile yie ka ọ bụ ezigbo nke gị - ezigbo ọrụ!